यौन दुर्व्यवहारको घटनामा दक्षिण कोरियाका वायु सेना प्रमुखले दिए राजीनामा – Dullu Khabar
काठमाडाैं । दक्षिण कोरियाको वायु सेनाका प्रमुखले यौन दुर्व्यवहारको घटनापछि राजीनामा दिएका छन्। शुक्रबार सेना प्रमुख ली सियोङ योङले राष्ट्रपति मुन जाइ इनलाई राजीनामा दिएका हुन्। उनको राजीनामा तत्कालै स्वीकृत भएको छ।
‘यदि तपाईंहरू आफ्नो सेनाको एक जना मानिसको सक्नुहुन्न भने देशको रक्षा कसरी गर्नुहुन्छ,’ पीडितकी आमाले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग भनेकी छन्,‘तपाईंहरूले कसरी उनलाई त्यति एक्लो पार्नुभयो? उनले कसरी सोचिन् कि मेरा लागि यो दुनियाँमा कोही छैन भन्ने ठानिन् र त्यति कठोर निर्णय गरिन्?
‘मैले यो परिस्थितिका लागि जिम्मेवार ठानें,’ सेना प्रमुख योङले भने,‘मृतकप्रति मेरो गहिरो श्रद्धाञ्जली र परिवारप्रति समवेदना छ।’